Illaa iyo hadda, shaqaaluhu waxay ku qasbanaadeen inay si qancsan u caddeeyaan inay cudurka ku qaadeen shaqada. Laakiin 16 gobol ayaa hadda ka fiirsanaya inay cusbitaalka saaraan: Ka dhig mid caddeeya in shaqaaluhu aanu cudurka ku qaadin shaqada.
Mid ka mid ah walxaha badan ee ka dhiga cudurka coronavirus 2019 (COVID-19) oo ay adag tahay in la daweeyo ayaa ah in qofku uusan si sax ah u tilmaami karin meesha ama sida qof uu ugu dhacay cudurka. Shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee helay COVID-19 (iyo qoysaska shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee cudurka u dhintay) waxay ogaadeen in isku dayga lagu doonayo helitaanka macaashka magdhowga ama dheefaha dhimashada ay noqon karto wax aan macquul ahayn, Kaiser Health News (KHN) ayaa maanta soo warisay.
Ilaa iyo hada, shaqaaluhu waxay ku qasbanaadeen inay si cad u cadeeyaan inay cudurka ku qaadeen shaqadooda, ma ahan dood fudud oo lagu guuleysto iyadoo la ogyahay inay jiraan dad badan oo cudurka astaamaha astaamaha ka dhex wada.
Hadda, sida laga soo xigtay KHN, 16 gobol iyo Puerto Rico waxay rabaan in ay cusbitaalka saaraan: ka dhig mid caddeeya in shaqaaluhu aanu cudurka ku qaadin shaqada.
"Biilasha way ku kala duwan yihiin baaxadda shaqaalaha ay daboolaan," ayaa lagu soo warramey KHN. Qaarkood waxay ilaaliyaan dhammaan dadka ka tagay guriga inay shaqeeyaan inta lagu jiro amarada joogitaanka guriga. Kuwa kale waxay ku egyihiin jawaabayaasha koowaad iyo shaqaalaha daryeelka caafimaadka. Qaarkood waxay daboolayaan oo keliya shaqaalaha jirada inta lagu jiro xaaladaha degdegga ah, qaar kalena waxay daboolayaan waqti dheer.
Gobollo kala duwan ayaa qaadaya habab kala duwan, qaar ka mid ah qaababkaasna waxaa ka soo horjeeda isbitaalada iyo ururada ganacsiga. KHN waxay soo xiganeysaa biil ka socda New Jersey kaas oo u fududeynaya shaqaalaha aasaasiga ah ee helay COVID-19 intii lagu jiray xaalad deg deg ah si loo caddeeyo inay ku heleen shaqada.
Chrissy Buteas waa sarkaalka ugu sareeya arimaha dawlada ee Ururka Ganacsatada & Warshadaha ee New Jersey, oo ka soo horjeedda sharciga, oo ay meel mariyeen Golaha Guurtida ee gobolka isla markaana uu sugayo Golaha Guud. "Waxyaabaha aan ka walwalsan nahay ayaa ugu horrayn ah in qarashyada sheegashooyinkani ay buuxin karaan nidaamka, oo aan loogu talagalin in lagu maareeyo sheegashooyinka inta lagu jiro aafada adduunka," ayuu yidhi Buteas.
KHN waxay sidoo kale eegaysaa kiis ku saabsan Virginia oo ah in kaaliye dhakhtar (PA) oo sameeyay baaritaanada COVID ay ahayd in isbitaal la dhigo markii uu cudurka la soo degay muddo toddobaad ah, isla markaana uu ku dhaawacmay shan toddobaad oo shaqo ah.
PA waxay codsatay inay buuxiso foomamka magdhawga shaqaalaha. Waa loo diiday foomamka ka dibna shaqada ayaa laga joojiyay shan maalmood ka dib, isaga oo wata $ 60,000 oo isbitaalka ah. Garyaqaan Michele Lewane ayaa wakiil uga ah PA kiiska. Sida laga soo xigtay KHN: “Lewane wuxuu yiri sharciga ka jira Virginia waxay u qaadan doontaa COVID-19 'cudur caadi ah oo nolosha ah,' oo la mid ah hargabka ama ifilada. Waxay sheegtay inay tahay inay ku caddeyso "caddeyn cad oo lagu qanci karo" inuu ku qabtay coronavirus-ka shaqada.